ABARHANELWA KUTWITTER BASETA I-GAY EMVA KOGCINO LUKACARDI B LOQHAWULO-MTSHATO - HOLLYWOOD
Uhlobo olutsha lwentelekelelo luvela Ukulinganisa Isini phakathi kokuhlukana kwakhe Ikhadi B . Emva kolwazi olwaphuliweyo lokuba umntu obhinqileyo waseBronx ufake isimilo sokuqhawula umtshato nomyeni wakhe oneminyaka emithathu, abantu barhanela ukuba IMigos ilungu lobufanasini.
Amarhe okuba i-Offset ithathela ingqalelo abesilisa baqala ukuvela kwiinyanga ezili-12 zokugqibela emva kokuba i-akhawunti yakhe ye-Twitter ithumele imiyalezo efundayo, ndiyayikhotha izidlele, ndiyindoda yesini kunye neebhola ebusweni bam. I-Ric Flair Drip isingqisho ibangexesha lokuba i-akhawunti yakhe ye-Twitter igqekeziwe, nangona kunjalo abanye abantu bazise ii-tweets njengoko zibanceda babhengeze.
Ndivile ukuba ukuqala kwayo kukungqingili, omnye umntu ulinganiswe nesizathu sokuba kutheni uCardi enqwenela ukugqiba umtshato wakhe kwinkwenkwezi ye-rap eneminyaka engama-28. Ngaba ayisiyiyo i-Offset yobufanasini nangona? omnye ucele ukuqinisekiswa, ngelixa uthumela umfanekiso-skrini weetweets eziphelelwe lixesha.
Umntu we-Twitter ukholelwa ukuba i-Offset yifanasini.
Isizathu esiyinyani sokuqhawula umtshato siqhawula umtshato, enye ibango elinobungqina obufanayo, ngelixa umntu odidekileyo eceliwe, kunye nokususwa kufana nokuba yeyona ndoda inesidima kwaye kunjalo ulifanasini?
Ngaphandle kwenjongo ebonakala ngathi ihlazo, unikezelo luchaza ukuba ubudlelwane bukaCardi kunye no-Offset buphazamisekile, ngakumbi kuyo yonke i-COVID-19 yokuvalelwa yedwa. UCardi kunye no [Offset] zange nangayiphi na indlela bahlala ngokudibeneyo ngaphezulu kweentsuku nje ezimbalwa. Ngoku babedibene iinyanga, kwaye yomelele, ubonelelo luxelela iMTV News.
Olunye unikezelo, okwangoku, kwangaphambili wafundisa ABANTU ukuba uCardi wayenelungelo lokungathembeki ku-Offset. Ngelixa wayemxolele kwimicimbi yakhe yangaphambili, waxela ukuba uyeke emva kokuba ebanjiwe nje ngokunyaniseka kwakhona.
I-Offset sele ikhohlise ixesha elipheleleyo [bebekunye], nangona kunjalo uCardi wayebonakala ngathi yindlela eyahlukileyo ngenxa yomntwana, ubonelelo lubango, kubandakanya, Wayengadingi neentloni. Kodwa ubenele.
UCardi wafaka amaphepha oqhawulo mtshato eFulton County, e-Georgia, ngolwe-Lwesibini, nge-15 kaSeptemba. angalungisa amaphepha ukuze avakalise ukungavisisani kangako ngenxa yokuba enqwenela ukuqhawula umtshato ngoxolo.
Izigaba: Hollywood Tech-Iindaba Umqala
unyaka omtsha onwabile ngolwimi lwaseJamani
kellyanne judd kunye nees
Kutheni uJadzia dax ebulewe
URyan Myers utshatele uMelissa Mack
Ilana becker amaqashiso amakhulu